Izicelo ezi-7 ezinhle kakhulu ezishintsha umbala wezinwele ngesikhathi sangempela, i-Emulator.online ▷ 🥇
Uhlelo lokusebenza olushintsha umbala wezinwele lungaba wusizo ekuzijabuliseni nasekukhohliseni abangane bakho nasekukusizeni ukuthi unqume ukuthi yimuphi umthunzi ozopenda ngawo. Lezi zinhlelo zokusebenza zikuvumela ukuthi uzame ukubukeka okusha ngaphambi kokuya esalon, imvamisa kunengqondo. Ngakho-ke, kunengozi encane yokuzisola kamuva.
1. Umbala wezinwele
Umbala Wezinwele unikeza izitayela ezahlukahlukene zokufaka imibala, njenge unwele, kumnyama, abantu abadala noma izinwele zonke. Lapho uvula uhlelo lokusebenza, umsebenzisi ubhekana nesithombe esivela kwikhamera, kepha kungenzeka futhi ukusebenzisa isithombe kusuka kumakhalekhukhwini. Vele ukhethe imibala ezansi kwesikrini.
Kunezinketho ezinesibindi, ezinjenge-shades ehlukahlukene eluhlaza, onsomi, oluhlaza okwesibhakabhaka nokuvame kakhulu, njenge-blonde, nsundu nokubomvu. Uhlelo lokusebenza lukuvumela ukuthi uhlukanise isikrini ukuze uqhathanise izithombe ngesikhathi sangempela. Noma kungenangqondo, vele uthinte isikrini ukuthatha isithombe noma uthinte bese ubamba ukurekhoda ividiyo.
Umbala wezinwele (mahhala, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo): I-Android | ios
2. UFabby Bheka
Thola ukuthi uzobukeka kanjani ngombala wezinwele omusha ngesikhathi sangempela
I-Fabby Bheka uhlelo lokuhlola lwe-Google olwenzelwe ngqo ukushintsha umbala wezinwele. Ukusetshenziswa kwethoni kwenzeka ngesikhathi sangempela. Vele uthinte ukhiye bese ubheka ushintsho lwesikhathi. Kunezinketho zakudala, ezifana ne-blonde, obomvu, nsundu kanye mpunga, ngisho nezingajwayelekile kakhulu, njenge-blue, pink, orange, njll.
Uma uwuthanda umphumela, ungathatha isithombe, ku-shutter maphakathi kwesikrini, futhi usabe kalula ku-Facebook, Instagram, Snapchat, phakathi kwabanye. Uhlelo alunakho ukusebenza okuyinkimbinkimbi, kepha futhi alunazinsiza zokwenza ngokwezifiso noma zokuhlela.
UFabby ubukeka (mahhala): I-Android | iOS
I-Instagram ayisona isicelo esithile sokushintsha umbala wezinwele, kepha inezihlungi eziningana ezikuvumela ukuthi usebenzise ama-shades amasha ngesikhathi sangempela. Ukuze wenze lokhu, vele uye ku-Izindaba, pheqa ibha yemiphumela kusuka kwesokudla kuye kwesobunxele, kuze kube sekugcineni. Ngemuva kwalokho uzobona inketho Imiphumela Yokusesha, okufanele uyithinte.
Esikrinini esivelayo, iya kusithonjana sengilazi yokukhulisa, esitholakala phezulu kwesikrini ngakwesokudla. Ensimini yokusesha, faka amagama afana nalawa izinwele ezimibalabala o umbala wezinwele futhi uzobona izinketho eziningi zokuhlunga ezinikezela ngemisebenzi.
Dlala i-dee oyithandayo bese Ukuzwa. Uzoyiswa esikrinini sokushicilelwa kwezindaba, lapho ungathatha khona izithombe futhi urekhode amavidiyo, njengoba wenza nganoma yisiphi esinye isihlungi.
Umhlahlandlela Izihlungi ezifihlekile nemiphumela ezindabeni ze-Instagram - Bona ukuthi ungakuthola kanjani ichaza isifundo ngokuningiliziwe.
Instagram (mahhala): I-Android | iOS
K-POP kwekhanda Simulator
I-Hairfit igqugquzelwe yizinwele zabaculi bohlobo lomculo lwe-K-Pop abavela eSouth Korea. Isicelo ikuvumela hamba isithombe esivela kugalari noma usithathe khona lapho. Umsebenzisi kufanele aqale akhethe izinwele bese eqhubeka i-tincture ukushintsha iphimbo.
Kunezinketho eziningi zombala ezitholakalayo, kufaka phakathi ezithandwayo ezifana ne-lilac, pink, purple, nohlaza okotshani. Kokubili isitayela sezinwele nombala kungalungiswa ukuze kubukeke kungokwemvelo ngangokunokwenzeka.
Izinwele (mahhala): I-Android
Yize ugxile kwimiphumela yokwakheka, i-YouCam Makeup inesici esithuthukile sokushintsha umbala wezinwele ngesikhathi sangempela. Umsebenzisi angazama izitayela zemibala emibili, afanise umthunzi wazo wangempela, noma afake umthunzi owodwa.
Kungenzeka ukuthi ulungise ukuqina, ukugqama, kanye nokumbozwa kombala noma ukuthi kungakanani ukuxubeka kwithoni yaso yasekuqaleni. Uma uthanda umphumela, uhlelo lokusebenza alukuvumeli kuphela ukuthatha isithombe, kodwa futhi nokurekhoda amavidiyo ngesihlungi.
Ubuciko be-YouCam (mahhala, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo): I-Android | ios
6. Udayi wezinwele
Idayi Yemibala Yezinwele ikuvumela ukuthi uthathe isithombe khona lapho noma usebenzise esisodwa esitholakala kuLabhulali. Ngemuva kwalokho, umsebenzisi kufanele akhethe, emfanekisweni, indawo yezinwele bese ethinta ithoni afuna ukuyifaka. Ungakhetha umbala owodwa ukupenda yonke into bese ufaka abanye ngemicu embalwa nje.
Uma ufuna, ungadala nombala wakho usebenzisa inketho Faka umbala. Umphumela ungagcinwa ocingweni noma wabelane ngawo kwezinye izinhlelo.
Idayi yezinwele (mahhala, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo): iOS
7. Ushintsho lombala wezinwele
I-Hair Color Changer inesiphakamiso esifana kakhulu ne-Hair Colour Dye ye-Android. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi usebenzise izithombe ezivela kugalari noma uzibeke khona lapho. Ngemuva kwalokho mane uthephe umbala owufunayo bese uwusebenzisa ngaphezulu kwendawo yezinwele ngomunwe wakho. Kungenzeka ukusebenzisa amathoni amaningana emfanekisweni ofanayo ngisho nokufaka umbala kwezinye izinto zesithombe.
Futhi, umsebenzisi angashintsha ubukhulu bombala, enze umphumela ube ngokoqobo ngokwengeziwe. Uhlelo lokusebenza lunikeza izinketho zokwabelana ngomphumela ekuxhumaneni nomphakathi noma ukulugcina kudivayisi. Ungacelwa ukuthi uyinike izinkanyezi ezinhlanu. Awudingi ukwenza lokhu ukufinyelela insiza.
Ushintsho lombala wezinwele (mahhala): I-Android
Izilungisi zezinwele ezinhle kakhulu nombala ukushintsha ukubukeka
Uhlelo lokusebenza lushintsha ubulili bakho futhi likwenze owesilisa noma owesifazane; bona ukuthi ungayisebenzisa kanjani
Izicelo ezizosiza ngokwenza izimonyo